Xildhibaan hore Surcad “Gole-yaasha deegaanka waa muhiim inay hogaamiyaan dadka bulshada qiimaha weyn ugu fadhiya” – Kalfadhi
Magaalada Gaalkacyo ee xaruunta gobolka Mudug waxa ka socda dadaalo lagu doonayo in 25ka bishan lagu soo dhiso golaha deegaanka degmada, kadib markii bishii nofembar la kala diray golihii deegaanka degmadaas.
Masuuliyiin isugu jira Baarlamanka oo fasax ku jira iyo xukuumadda ayaa toddobaadkan hawshaas u tegay magaalada, waxaase soo baxaya talooyin bulsho oo ku aadan xulidda xubnaha golaha deegaanka iyo in aad looga fiirsado si loo helo gole xasiloon oo baahiyaha magaalada wax ka qaban kara.
Mudane Siciid Surcad oo ku jiray golihii hore ee wakiillada Puntland ayaa ka mid ah dadka ka hadlay hannaanka xullida xubnaha golaha deegaanka, wuxuuna ku taliyay in golaha cusub uu noqdo mid ay ku jiraan dadka miisaanka ku dhex leh degmooyinka.
“Degmooyinka Puntland waa aas-aaska dowladnimada waxayna bixiyaan adeegyada aas-aasiga ee Bulshadu aysan marnaba ka maarmin sidaas darteed waa muhiim inay hogaamiyaan dadka bulshada qiimaha weyn ugu fadhiya sida dhaqaatiirta, ganacsatada, culimada, macalimiinta, Ingineerada iyo aqoonyahanada kale ee bulshada” Ayuu yiri Surcad.
Puntland bulshooyinka ayaa soo doorta xubnaha golaha deegaanka oo lagu qaybsado awood qaybsi beeleed, deedna golahaas waxay iska sii dhex doortaan guddoonka oo isagu toos u maamula hawlaha dowladda hoose, sida uu qabo xeerka L7 ee dowladaha hoose ee Puntland.
Xukuumadda cusub ayaa qorshaynaysa in ay sanadkan gole deegaan u dhisto ilaa saggaal degmo, kuwaas oo isugu jira kuwa la kala diray golayaashoodii iyo kuwa aan hore u lahayn. Khilaafaad ayaa inta badan hareeya golayaasha deegaanka dhexdooda taas oo keenta in la kala diro markii loo maara waayo.
Xildhibaano katirsan Golaha shacabka oo ka soo horjeestay natiijada Shirkii Nairobi